Abakhiqizi bemitha ye-Din kagesi abakhiqizi bamandla kagesi - Abakhiqizi baseChina i-Din ragesi yamandla kagesi, Fekthri
I-single phase electronic ene ...
Izigaba ezintathu ze-elekthronikhi zikagesi ...
I-single-phase elula multi-f ...
Ukusebenza kwamandla kagesi ...
Isigaba ezintathu se-LCD sinamathele ...
I-Din Rail yesigaba esisodwa amandla ...
Lokhu kusebenzisa igobolondo elibuhlungu elingesimbi, elikhanya ngosayizi futhi kulula ukulifaka; iqoqa isibonakaliso samandla esikhathi sangempela semitha yamandla ngayinye, izinkomba zamandla ayiqhwa nsuku zonke, kanye nokufunda imitha nsuku zonke okubonisa amandla eqandisiwe; ukulungiselelwa okukude nendawo lendawo kanye nohlelo lokufunda imitha.
I-3PHASE 4WIRE ENERGY METER (ikhadi le-IC)
I-3 phase 4 wire prepaid energy metres (ikhadi le-IC) ingumkhiqizo omusha wokulinganisa amandla athuthukiswe futhi wakhiqizwa yinkampani yethu ngokuya ngezincazelo zobuchwepheshe ze-GB / T17215.321-2008 ne-GB / T17215.323-2008. Lo mkhiqizo usebenzisa imijikelezo emikhulu ehlanganisiwe namasu we-SMT, ngemisebenzi efana nokukalwa kwamandla kagesi, ukucubungula idatha, ukuqapha real-time, kanye nokuxhumana kolwazi.
I-single-phase din reli umeme kagesi imitha (esebenzayo) ingumkhiqizo omusha wokulinganisa amandla athuthukiswe futhi wakhiqizwa yinkampani yethu ngokuya ngezincazelo zobuchwepheshe ze-GB / T17215.321-2008. Lo mkhiqizo usebenzisa imijikelezo emikhulu ehlanganisiwe namasu we-SMT, ngemisebenzi efana nokukalwa kwamandla kagesi, ukucubungula idatha, ukuqapha real-time, kanye nokuxhumana kolwazi.
I-single-phase din reli kagesi yamamitha (kude) ingumkhiqizo omusha wokulinganisa amandla kagesi athuthukisiwe futhi wakhiqizwa yinkampani yethu ngokuya ngokuchazwa ngobuchwepheshe be-GB / T17215.321-2008. Lo mkhiqizo usebenzisa imijikelezo emikhulu ehlanganisiwe nezinqubo zokukhiqiza ze-SMT, ngemisebenzi efana nokukalwa kwamandla kagesi, ukucubungula idatha, ukuqapha isikhathi sangempela, kanye nokuxhumana kolwazi.
Isigaba esisodwa se-DIN Rail Energy Meter card ikhadi le-IC)
I-single-phase din reli kagesi yamamitha (i-IC khadi) ingumkhiqizo omusha wokulinganisa amandla kagesi athuthukiswe futhi wakhiqizwa yinkampani yethu ngokuya ngokuchazwa ngobuchwepheshe be-GB / T17215.321-2008. Lo mkhiqizo usebenzisa imijikelezo emikhulu ehlanganisiwe nezinqubo zokukhiqiza ze-SMT , ngemisebenzi efana nokukalwa kwamandla kagesi, ukucubungula idatha, ukuqapha isikhathi sangempela, kanye nokuxhumana kolwazi.
Isigaba esisodwa se-DIN Rail Energy Meter （dormitory）
I-single-phase din reli umeme kagesi imitha (dormitory) ingumkhiqizo omusha wokulinganisa amandla kagesi athuthukisiwe futhi wakhiqizwa yinkampani yethu ngokuya ngokuchazwa ngobuchwepheshe be-GB / T17215.321-2008.Lo mkhiqizo usebenzisa imibuthano emikhulu ehlanganisiwe nezinqubo zokukhiqiza ze-SMT, ngemisebenzi efana nokukalwa kwamandla kagesi, ukucubungula idatha, ukuqapha isikhathi sangempela, kanye nokuxhumana kolwazi.
I-3PHASE 4WIRE ENERGY METER (kude)
3 isigaba 4 imitha yamandla kagesi (okukude) ingumkhiqizo omusha wokulinganisa amandla athuthukiswe futhi wakhiqizwa yinkampani yethu ngokuya ngezincazelo zobuchwepheshe ze-GB / T17215.321-2008 ne-GB / T17215.323-2008. Lo mkhiqizo usebenzisa imijikelezo emikhulu ehlanganisiwe namasu we-SMT, ngemisebenzi efana nokukalwa kwamandla kagesi, ukucubungula idatha, ukuqapha real-time, kanye nokuxhumana kolwazi.